Prof. Afyare “Dowladda waxaa ka go’neyd doorasho ay ogtahay natiijadeeda inay qabato” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Prof. Afyare “Dowladda waxaa ka go’neyd doorasho ay ogtahay natiijadeeda inay qabato”
Prof. Afyare “Dowladda waxaa ka go’neyd doorasho ay ogtahay natiijadeeda inay qabato”
Wuxuu ahaa dhawaaq argagax iyo quus-geliyay bulshada Soomaaliyeed, markii Wasiirka Warfaafinta Somaliya, Cismaan Abokar Dubbe uu Warbaahinta u sheegay in uu guuldareystay shirkii loogu gogol xaarayay shirka wadatashiga qaran, ee ay Arbacadii Madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ku yeesheen Xerada Afisyooni ee Magaalada Muqdisho.
“Xukuumaddu waxay maanta u cadeynaysaa ummadda Soomaaliyeed in labada Madaxweyne Goboleed ee Puntland iyo Jubbaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho oo aasaaskeedu yahay 17-kii September iyo is fahamkii 16-kii February, waana wax laga xumaado in labadaa Madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ay noqdeen jid iyo jihadiid aan doorasho ogolayn.” Ayuu yiri Wasiirka.
Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa si kulul uga jawaabay eedeymaha ay u soo jeedisay Dowladda Federaalka, iyagoona sheegay inay layaabeen warka ka soo yeeray Villa Somalia, haddii sida ay sheegeen ay Madaxweynaha ku ballameen in la soo kala nasto, dibna leeskugu soo laabto.
Prof. Afyare Cabdi Cilmi oo ka faallooda arrimaha Somaliya ayaa sheegay in labada dhinac ay ku hardamayaan awoodda dowladnimada ee dalka, oo doorashada aysan ahayn waxa ay isku hayaan.
“Maadaama cilmi baaris ka sameynay afar jeer, waxaa ii muuqatay waxa leesku hayo inay ka culus yihiin doorashada keliya. Doorashada hadda waa shayga lagu dirirayo korkiisa, laakiin awooddaa leesku haystaa.” Ayuu yiri Prof. Afyare Cabdi Cilmi oo la hadlay BBC Somalitv.
Waxa kaloo uu yiri “Waxa kaloo lagu muransan yahay nuxurka Dowladnimada Soomaalidu nooca uu noqon doono. Si hoose markaad u sii fiiriso doorasho mala qabanaa iyo 17-kii September waxaan waxaa waaye meelo soke, laakiin anaga 2019-kii ayay noo soo baxday meeshan loolanka awoodda ee ka jira culeyska uu leeyahay, illaa iyo intiina waan ka digeynay waana sheegeynay, hadda markii ugu dambeysayna runtii waan ka hadlayay.”
Prof. Afyare Cabdi Cilmi ayaa ku waramaya in doorashada ay tahay waxa ugu fudud ee laga heshiin karo, marka aad eegto waxa asalka u ah khilaafka u dhaxeeya labada dhinac.
“Doorashadan waa waxa ugu fudud ee laga gudbi karo, laakiin waxa leesku hayo oo aasaaska ah oo nooca State-ka Somali Republic wixii la dhihi jiray meesha ka soo bixi karta, taas waaye meesha waxa leesku hayo, taana lagama heshiin.” Ayuu yiri Prof. Afyare.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Meeshan hadda waxaa ka muuqata qoladan Madaxweyne Farmaajo iyo dowladdu inay u carareyso muddo kororsi, oo ay rabto xilli hore inay Baarlamaanka marsiiso oo ay sameyso. Qoladan kalena waxay aaminsan tahay wax la yiraahdo shanta Maamul Goboleed uun baa asal ah, ayagaana dowlad soo dhisi doona. Marka labadaa aragtiyoodna way kala jirtaa.”
Prof. Afyare ayaa iftiimiyay in bilowgiiba ay Dowladda Federaalka ka go’neyd inay dalka ka qabato doorasho ay natiijadeeda ogtahay, si lamid ah doorashooyinkii ay ka qabatay Dowlad Goboleedyada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle, oo musharaxiintii ay wadatay ay doorashooyinkaasi ku soo baxeen.
“Markii dowladdan ay meesha timid markiiba waxaa u soo baxay waxa meesha yaala iyo sida ay ayagu rabaan inay ku sii jooggaan, marka waxay is tusiyeen nidaamka meesha yaalaa inuusan ahayn nidaam ayaga waafaqaaya. Dowladda mar walba waxaa ka go’neyd doorasho ay ogtahay natiijadeeda inay qabato, sida kuwii ay qabatayba ka muuqatay.” Ayuu yiri Afyare Cabdi Cilmi.
Shirka Madaxda Soomaalida ay Arbacadii ku yeesheen Magaalada Muqdisho ayaa ahaa mid rajo badan ay bulshadu ka qabtay, dad badanina waxay is tusiyeen in markaan horumar laga samayn doono doorashada muddo dhaaftay, waxayse rajadaasi meesha ka baxday ka dib markii Wasiir Dubbe uu sheegay in shirkaasi lagu kala kacay, isagoona eedda dusha kaga tuuraya Maamulada Kismaayo iyo Garoowe.
Previous articleJabuuti oo saaka ka bilaabatay codeynta doorashada madaxtinimada ee dalkaasi
Next articleGuluf ciidan oo ka socda Bariga Gobolka Galgaduud (SAWIRRO)